Ogaden News Agency (ONA) – Xidhiidhka Kadhaxeeya Al-shabaab & Itoobiya oo Soo Shaac Baxay.
Xidhiidhka Kadhaxeeya Al-shabaab & Itoobiya oo Soo Shaac Baxay.
Wararka ka imanaya wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in uu soo shaac baxay shakigii xukuumada wayaanaha laga qabay ee ahaa in ay xidhiidh dhaw laleeyihiin ururka Alshabaab ee kajira wadanka Somalia.
Sida xogta aan kuhelay taliska wayaanaha ayaa shaaca kaqaaday in ay saraakiil kamid ah sirdoonka Itoobiya usoo xidheen in ay lashaqeeyaan maleeshida Al-shabaab, saraakiisha xabsiga ladhigay ayaa lasheegayaa in lagu qabtay iyagoo gacmaha kula jira howlo kamid ah xidhiidhkii latuhun sanaa ee Itoobiya iyo Al-shabaab.
Taliska wayaanaha ayaa si uu indhaha caalamka usii jeediyo sheegay in ay xidheen Dahiri Adunya iyo Dhara Dhasta oo kamid ahaa saraakiisha sirdoonka wayaanaha wuxuuna taliska wayaanuhu sheegay in ay saraakiishu la shaqaynayeen ururka Al-shabaab ee wadanka Somalia.
Qaar kamid ah dowladaha aduunka iyo ururada mucaaradka ah ayaa siwada jir ah xukuumada wayaanaha ugu eedeeyay in ay sitoos ah iyo sidadbanba ula shaqayso maleeshiyada Al-shabaab ee lagu daray liiska argagixisada.
Kooxda Al-shabaab ayaa latuhunsan yahay in ay hubka iyo rasaastaba ka helaan wadanka Gumysiga Itoobiya iyadoo taas badalkeeda kooxdu ayna wax dagaal ah kuqaadin ciidamada gumaysiga ee Somalia kusugan iyo guud ahaan wadanka Itoobiya.
Dhinaca kale kooxda TPLF ayaa xabsiga utaxaabtay Tsegay teklu oo katirsanaa ciidanka sirdoonka wayaanaha, Tsegay ayaa lagu eedeeyay in uu xog badan siiyay ideecada ESAT Radio, waxayna kooxdu sheegtay in sirta xukuumada ee banaanka socota uu mas’uul ka ahaa.
Sikastaba ha ahaatee waxaa si muuqata usoo baxay heshiiska kooxda Al-shabaab iyo taliska wayaanaha udhaxeeya oo kooxda TPLF tu ay sheegatay in ay qaar saraakiisheeda kamid ah uxidh xidhay howlahaas.